एकदिवसीय विश्वकपमा ! यसो भए मात्र नेपालको सम्भावना रहन्छ – onlinekhelkhabar.com
एकदिवसीय विश्वकपमा ! यसो भए मात्र नेपालको सम्भावना रहन्छ
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on २० श्रावण,२०७६
साउन २०, अनलाइन खेलखबर || सन २०२३ मा भारतमा हुने एकदिवसीय बिश्वकपको छ्नोट प्रक्रियाको संरचना अनुरुप अब नेपालको बाटो आईसीसी लिग -२ को रहेको छ ।
केहि महिनाअघि नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदशन गर्दै नामिबिया, पपुवा न्युगिनी , ओमान र अमेरिकाले आईसीसी एकदिवसिय मान्यता प्राप्त गरे सँगै विश्वकपको छनोटका बाटोहरु खुलेका हुन् ।
जसअनुसार हालै ईङ्गल्याण्ड र वेल्समा सम्पन्न बिश्वकपमा झै १० टिमले नै सहभागिता जनाउने छ्न । तर अघिल्लो भन्दा यसपटक छनोटका बाटोहरुमा आईसीसीले ठुलो परिवर्तन गरेको छ ।
आइसिसिको नयाँ संरचना अनुसार बिश्वकपमा पुग्न कुल ५ वटा बाटो बनाएको छ । जसमा पहिलो आईसीसी सुपर लिग , दोस्रो आईसीसी लिग २ , तेस्रो आईसीसी च्यालेन्ज कप , त्यस्तै चौथो बिश्वकप क्वालिफायर प्ले अफ र अन्तिम बिश्वकप क्वालिफायर पारगर्नु पर्ने छ ।
यस्तै आईसीसी लिग २ मा नेपाल, युएई र स्कटल्याण्ड सहित डिबिजन २ बाट हालै आएका ओमान , अमेरिका , नामिबिया र पपुवा न्युगिनी गरि कुल ७ टिमले यो लिग खेल्नेछन । यहाँबाट उत्कृष्ट ३ टिम बिश्वकप छ्नोट खेल्नेछन । भने बाकी ४ टिम लाई बिश्वकप क्वालिफायर प्ले अफ खेल्ने पर्नेछ ।
यस्तै अर्को आईसीसी च्यालेन्ज कप रहेको छ । जहाँ विश्व क्रिकेट लिगका २१-३२ स्थानका १२ टिमहरु यो कप खेल्नेछन जहा बर्मुडा, क्यानडा, डेनमार्क, हङकङ, इटाली, जर्सी, केन्या, मलेसिया, सिंगापुर, युगान्डा, भानुआटु, र कतारको सहभागिता रहने छ । च्यालेन्ज कपमा २ समूह बिभाजन गरिने छ । ६/६ बटा राष्टको २ समूहबाट समूह बिजेता बन्ने २ राष्ट ले बिश्वकप क्वालिफायर प्ले अफमा पुग्ने छ्न ।
पहिलोमा आईसीसी लिग २ खेल्नु पर्नेछ । नेपाल, युएई र स्कटल्याण्ड सहित डिबिजन २ बाट भखरै आएका ओमान , अमेरिका , नामिबिया र पपुवा न्युगिनी गरि कुल ७ टिमले यो लिग खेल्नेछन । जहाँ नेपालले २ बर्ष भित्र ३६ खेल खेल्नेछ । यहाँ बाट उत्कृष्ट ३ टिम बिश्वकप छ्नोट खेल्नेछन । भने बाकी ४ टिम लाई बिश्वकप क्वालिफायर प्ले अफ खेल्ने पर्नेछ ।
यदि नेपालले उत्कृष्ट ३ भित्र पर्न सके सिधै बिश्वकप छ्नोटमा स्थान बनाउने छ । तर उत्कृष्ट ३ भित्र नपरेमा फेरि अर्को मौका पाउने प्ले अफका लागि पाउने छ ।
र अन्तिम भनेको बिश्वकप क्वालिफायर रहेको छ । जसमा आईसीसी सुपर लिगका अन्तिम ५ टिम हरु , आईसीसी लिग २ का उत्कृष्ट ३ टिम र बिश्वकप क्वालिफायर प्ले अफ बाट आएका २ टिम गरि कुल १० टिमले बिश्वकप क्वालिफायर खेल्नेछन ।
जसबाट मात्र २ टोली ले बिश्वकप खेल्ने अबसर प्राप्त गर्ने हुँदा नेपालका लागि भने ठुलो चुनौती र गाह्रो देखिन्छ ।
नेपालले लिग २ को सुरुवात घरेलु मैदानबाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ | किर्तिपुरस्थित त्रिवी अन्तराष्टिय क्रिकेट मैदानमा हुँने भनिएको खेलमा नेपालले ओमान र अमेरिकालाई स्वागत गर्नेछ ।
जसअनुरुप आउँदो माघ २२ देखी २९ सम्म नेपाल , ओमान र अमेरिका सम्मिलित सिरिज हुँने भनिएको छ ।
Previous Postग्लोबल टी -ट्वान्टीमा सन्दिपको टिम टोरोन्टोको दोस्रो जित : सन्दिपको पनि सुधारिएको प्रदर्शन
Next Postएसिया कपको लागि नेपाली युवा टोली तयारीमा जुट्दै